गोमालाई बिजुली ट्रली – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (३१ भाद्र – ६ आश्विन, २०७५) बाट
पीडा, हिंसा वा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई राज्यले जबसम्म संविधानले दिएको जीवन, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार पूरा गर्न सक्दैन, त्यो अभिभारा अन्य नागरिकको हुन जान्छ ।
पीडा त देशमा सर्वत्र छ, कुनै एक व्यक्तिको अवस्था उजागर गर्न खोज्दा बाँकी लाखौं पीडितको कुरा नि ! भन्ने प्रश्न पनि जायज हो । तर एउटा नागरिकको पीडा र आकांक्षाको कुरा राख्नु अनुचित होइन– विम्ब हो, जसले अरू धेरैको अवस्था प्रतिनिधित्व पनि गर्छ ।
मैले गोमालाई चिनेको १६ वर्षअघि हो, जब स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्रले जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रबाट आफ्नो काम शुरु गर्‍यो । छेवैको अपाङ्गता भएकाहरू बस्ने राइडर चेशर होम्स्‌मा बस्दथिइन् गोमा ।
शिर र हात बाहेक शरीरका कुनै अंग नचल्ने गोमाको सौहार्दता उल्लेख्य थियो । भर्खर स्थापित ‘स्पाइनल’ का हामीले उनीबाट धेरै हौसला पायौं । पछि पुनर्स्थापना केन्द्र साँगा, काभ्रे सर्‍यो तर हाम्रो लागि गोमाको ओज उस्तै रह्यो ।
रौतहटमा पाँच छोरी र एक छाेरा मध्येकी माहिली गोमा जन्मेको माघ २०२५ मा । ११–१२ वर्षमा हिंड्न–ओर्न गाह्रो हुन थाल्यो । उनी बिस्तारै थला पर्दै जाँदा विपन्न परिवार हेटौंडा जिल्ला अस्पताल पुग्यो, तर रोग पत्ता लागेन । कुइना र घुँडाका जोर्नी सुन्निन थाले, बिस्तारै शरीर चल्नै नसक्ने भयो ।
२०४६ सालमा जोरपाटीस्थित ‘एचआरडीसी’ संस्थामा हाडजोर्नी सर्जन डा. अशोक बाँस्कोटाले उनको रोग पत्ता लगाए । यो थियो ‘मल्टिपल र्‍यूमाटोइड आर्थराइटिस्’, जसले जीउ भरिका ‘जाइन्ट’ लाई आक्रमण गर्छ । जसको रोकथाम र उपचार छैन, मात्र ‘व्यवस्थापन’ गर्न सकिन्छ ।
डा. बाँस्कोटाले पहल गरी गोमालाई राइडर चेशर होम्स्‌मा भर्ना गराए । आज उनको जोरपाटी बासको झण्डै दुई दशक भइसक्यो । शरीरमा रोगको आक्रमण बढ्दै गएर ह्विलचेयरमा बस्न नसकेपछि उनलाई ‘ह्विल बेड’ अथवा ट्रलीमा राखियो ।
गोमा दुलाललाई नयाँ साथी बनाउन मन पर्छ, गफिन रमाउँछिन्, नयाँ कुरा जान्न–सिक्न चाहन्छिन् । जीउ कमजोर छ, उत्साह यथावतै ।
ओल्टाईपल्टाई गर्ने, खान दिने, भित्र बाहिर गर्ने सबै अरूको सहारामा । गोमाकी माता दश वर्षअघि बित्नुभयो, पिता बितेको पाँच वर्ष भयो । बाबुआमा बितेपछि दाइ–बहिनीहरूसँग उनको सम्पर्क पातलिएको छ । कहिलेकाहीं मोबाइल फोन कसैले कानछेउ अडाइदिन्छ र भलाकुसारी गर्ने मात्र हो ।